ပဲခူးက မြွေမယ်တော်ကြီး စောနန်းဝေတဲ့. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပဲခူးက မြွေမယ်တော်ကြီး စောနန်းဝေတဲ့.
ပဲခူးက မြွေမယ်တော်ကြီး စောနန်းဝေတဲ့.
Posted by ေရႊတိုက္စိုး on Oct 24, 2011 in Copy/Paste | 20 comments
ဒါလေးကတော့ ကျိုက်ထီးရိုးခရီးရဲ. ကြားဖြတ်ပို.စ်လေးပါ…
ကျိုက်ထီးရိုးကပြန်လာတော့ ဘုရားဖူးကားက ဂိုက်က ပဲခူးရွှေမော်ဓော မသွားခင် မြွေအကြီးကြီးရှိတဲ့ဆီသွားချင်လားတဲ့ သွားချင်ရင် တစ်ယောက် ၁၀၀ဝ ပေးရင်လိုက်ပို.မယ် ဆိုလို. သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. ကားအကြီးကြီးနဲ. ပဲခူးမြို. ရဲ.လမ်းကျိုလမ်းကြားကနေ သွားရတာပါ…
ဂိုက်ပြောပြတာတော့.. အဲဒီမြွေကြီးက ရှမ်းပြည်ကလာတာတဲ့. ရှမ်းပြည်ကနေ.. သာကေတ ကိုရောက်ပြီး အဲဒီမှာ အဖမ်းခံရလို. တိရိစာ္ဆန်ဥယျာဉ်ပို.မလို.လုပ်တာ.. ကလေးလေးကို ပူးဝင်ပြီး ငါကရှမ်းပြည်ကလာတဲ့ မြွေမယ်တော် စောနန်းဝေ ပါတဲ့. ငါက သာသနာပြုဖို. ပဲခူး က အခုနေရာ (ကျွန်တော် နာမည်မေ့နေလို.) အဲဒီကို လိုက်ပို.ဖို.ပြောတာတဲ့ အဲဒါနဲ. အခု ရှိနေတဲ့နေရာကို.. ပို.ပေးရတာတဲ့. အခုတော့ သူကိုလှူတဲ့ အလှူငွေတွေနဲ. ဘုရားတည်နေတယ်လို.ပြောပါတယ်…
ကျွန်တော်လဲ ဗီဒီယို ရိုက်ရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို.သတိရတော့ ရိုက်လိုက်ပါတယ်.. အခုတစ်ပုံရိုက်ပြီး Memory Full သွားပါတယ်ဗျာ… တစ်ပုံတည်းနဲ.ကျေနပ်ကြပါ.
shwe tike soe လေးရေ (မင်န်ဘာတဦးသည် တရက်လျှင်ပို့စ် ၂ခုထက်ပိုမတင်ရ )တဲ့
ဟာ ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကို ဆောရီးပါဗျာ..
ကျွန်တော်မေ့သွားတယ်.. ပို.စ်မတင်တာကြာတော့ အားရပါးရ သတိလက်လွတ်တင်လိုက်မိပါတယ်..
သူကြီးကိုလဲ တောင်းပန်ပါတယ်.. ကျွန်တော့်ပို.စ်တွေ. ပွိုင့် မပေးလဲရပါတယ်နော်….
စည်းကမ်းဖောက်မိတဲ့ကျွန်တော် ရွာသူ။ရွာသားတွေအားလုံးကို အနူးအညွံ.တောင်းပန်ပါတယ်.နော်..
ရွှေတိုက်စိုးရေ… ပဲခူးကို လေးငါးကြိမ်မက ရောက်ဖူးပါလျှက် မြွေမယ်တော်ဆီကိုတော့တစ်ခါပဲရောက်ဖူးတယ် မှတ်မှတ်ရရ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားတာ … ။ လမ်းမသိလို့ … ဘေးကလူတွေမေးရင်း .. ဟိုးရှေ့နား ဟိုးရှေ့နားဆိုရင်းကနေ … ကားမောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ ကျော်သွားတာ …ပဲခူးမြို့ပြင် သနပ်ပြင်တောင်ရောင်မှ ပြန်လှည့်ရတယ်… ီလောက်တောင်မရောက်တဲ့အဆုံး ဖြစ်အောင်သွားဦးမယ်ဆိုပြီးရောက်သွားခဲ့ ဖူးတယ် … ။ အဲ့တုန်းက မြွေမယ်တော်က ဥပုပ်စောင့်နေတယ် …ကိုင်လို့ရတယ် .. အေးတိအေးစက်နဲ့ … ဘုရားသွားတဲ့လမ်းက နေအရမ်းပူပြီး ခေါင်းကိုက်တယ ်… မြွေတကောင်တစ်နေရာထဲမှာ အကြာကြီးအသားမစားပဲ နေနိုင်တာကတော့… ထူးတော့ထူးတယ်လို့ ဆိုရမယ် … ။
မြွေကြီး ကို ပိုက်ချံတွေ ဝိုင်းလှူတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ.. ပိုက်ချံ မှိုတွေနဲ့ မြွေကြီး တနေကုန်နေပြီး ဝဲပေါက်မှာ စိုးရတယ်။ အဟိ။
မြွေက ရေချိုးတယ်တဲ့ အမရဲ့ …နေ့တိုင်းရေချိုးတယ်လို့တော့ ထင်တာပါပဲ …
နောက်ခါ မြွေဝင်ပူးတဲ့ ခလေးလေး ပြပါလား…
ဘယ်ရိုပုံလေးလဲလို ့..တိချင်လို ့..
မြွေတစ်ကောင် က သာသနာ ပြုနိုင်တယ် ဆိုတာ ဟုတ်ပါ့မလား..။ ဘုရားတည်တာက ရော သာသနာ ကို ပြန်ပွားအောင် တကယ် သာသနာ ပြုတာရော ဟုတ်ပါ့မလား..?
တောင်ထိပ်မှာတော့ ဘုရားတွေက ပြည့်လို့ တောင်အောက် က ရွာသူရွာသားတွေက တော့ ဘာသားခြား ဖြစ်ကုန် ပြီဆိုတဲ့ စာသား ကို သတိရမိတယ်..။
ဘုရားထက်ကြီးတဲ့ ဘုရားလူကြီးတွေ က လူစိတ်ဝင်စားအောင် ဘိန်းကျွေးပြီး နှပ်ခိုင်းနေတာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား… ?????
we R one ရေ စဉ်းစားစရာပါ
မြွေတွေဖမ်းမိသမျှ ဘုန်းကြီးက အလှူခံရင်ခံ
အလှူမခံရင် ဝယ်ပါတယ်တဲ့ သူ့ပိုင်ကျောင်းဝိုင်းထဲကဘုရားမှာ
အဲဒီမြွေကို ထိန်းသိမ်းကျွေးမွေးနေတဲ့လူတွေ က မြွေကြီးကို လာကြည့်ပြီး ပေး/လှူသွားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ကို တစ်ကယ် ဘုရားတည် ရင်တော့ မြွေကောလူကော ကုသိုလ်ရမှာပါပဲ
သစ္စာ တရားကို သိတဲ့ တိရိစ္ဆာန် ဒီတစ်ခါဘဲကြားဘူးတယ် ဘုရားတည်မယ်ဆိုလို့ပါ
ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းကတော့ သင်္ကန်းကိုမြင်လို့ ဒေါသကို ချတာတော့ စာအုပ်ထဲဖတ်ဘူးပါရဲ့
အဟိတ်တိရိစ္ဆာန်က ကံ စိတ် ဥတု အဟာရ ကိုမှီပြီးဇီဝ ဆိုတဲ့ အသက်ရှိနေပါလျှက်
ရုပ်ကို ထားပြီး နာမ်က လူသားစီကို သွားပူးတယ်ဆိုတာက
အဘိဓမ္မာ မြတ်စွာဘုရားမဟောပါဘူး ဆိုတဲ့ သဂျီးမင်းတွက် တော်တော်အထောက်ကူဖြစ်သွား
ဘဒ္ဒ န္တ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု
ကြည့်ရတာ.. ဘယ်တော့… ကလေးတယောက် အမြိုခံရမယ်မသိဘူး..။
ဘဒ္ဒ န္တ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုအား.. ခရက်ဒစ်ပေးလိုက်ပါကြောင်း..။
A three-metre long Burmese python can easily killachild andafive-metre long (around 16.5 feet) Burmese python is certainly capable of overpowering and killingafully grown adult, so it is not advisable to handle suchalarge snake alone.
စပါးကြီးမြွေဟာ.. အစာမစားပဲ.. တနှစ်အထိ နေလို့ရတယ်လို့.. ရေးထားပါတယ်..။
ငတ်လာရင်.. တွေ့တဲ့အကောင်သတ်ပြီး မြိုတယ်တဲ့..။ သတိထားကြဖို့ပါ..။
သဂျီးပြောတာ မှန်တယ် ဗျို ့
တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲ ဆိုတာ သိလာရတယ်
ခုထိတော့ အဲ မြွေကြီးကို လူတွေ တိုးကြိတ်ကြည့်နေကြတာ နေ့တိုင်းပါပဲ။ မှန်ကနေလည်း ကြည့်လို့ရသလို အထဲဝင်ပြီးလည်း တိုးကြည့်ရတယ်။ အကောင်ရဲ့ လုံးပတ်က တော်တော်ကြီးတယ်။ အနားတိုးကြည့်ပြီး ကြက်သီးထလို့ မှန်ရဲ့ဘေးကနေပဲ ပြန်ထွက်ပြီး သွားကြည့်လိုက်တယ်။ လူတွေကတော့ နယ်စုံကနေ လာပြီး လှူနေကြတာ အများကြီးပဲ တွေ့ရပါတယ်။ ခေါင်းအုံးနဲ့အိပ်တာနော်။
မြွေမယ်တော်ကြီးခင်ဗျား.. အခွင့်သင့်ရင် ကျွန်တော်မျိုးဆီ အိမ်မက်မှာ လာတွေ့ပါအုံး။ အိမ်မက်ထဲ မြွေမြင်ရင် လာဘ်ရွှင်တယ် ပြောလို့ပါ။ မယ်တော်ကြီးကူမလို့ ငွေတွေရရင် ကုသိုလ်အလှူများ လုပ်ပေးပါ့မယ်။ မြန်မြန်ကူညီစေလိုပါတယ် ဘိုင်ပြတ်နေလို့ပါ…။
စူ့တယောက်ထဲ.. (တရုတ်သွေးပါသဖြင့် အသံမပီ ဖြစ်သွားရသည်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ)
အဲဒီမြွေကို (သူများတွေလုပ်သလို) အစားခိုးကျွေးရင် ခိုးကျွေး
ခိုးမကျွေးရင် တနေ့ လူသတ်မြိုလိမ့်မယ်
ဘုရားနားမှာ ကြွက်ပေါလို့ မြွေတွေ့ရင်၊
ကျောက်တုံးနှစ်ခုထပ်နေတော့ ကျိုက်ထီးရိုးကိုယ်ပွားဆိုပြီး ဘုရားချည်းစွတ်တည်
တနေ့ အဲဒီကျောက်တုံးနှစ်ထပ်ပြုတ်ကျမှ အရှက်ကွဲဦးမယ်။
တခုခု ထူးပြီ ဆန်းပြီ မြင်နေကျမဟုတ်ဘူးဆိုရင် မျက်စေ့မှိတ်ပြီးယုံ -င်ကုန်းပြီးကန်တော့တော့တာ။
နောက်ဘဝ @#%#*&^%^ ?????
တကယ်တော့ မြွေတွေ့ရင် ဘုန်းကြီးအလုပ်က ဘေးကင်းရာ ဝေးရာလွှတ်ခိုင်းဘို့ပဲ။
ပြီးတော့ တရားမရခင်ကိုယ့်ကိုမကိုက်အောင် ခန္ဓသုတ်လေးဘာလေး ရွတ်ဘို့ပဲလို့ထင်မိတယ်။
ဥစ္စာစောင့်က သိုက်နန်းရှင်က ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နတ်က ဘယ်နဂါးက